ukuthandana, uthando, ubudlelwane | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: ukuthandana, uthando, ubudlelwane
Ukwabelana ngesondo kwabasetyhini-yintoni ekufuneka uyazi kwaye uyiqonde
Ngoku ukhululeka ngakumbi nangakumbi kunye nokuhluka kwezesondo. Kodwa, kukho "amacala amabini" engqekembe. Ngawaphi amantombazana abelana ngesondo ezimpundwini ekufuneka eyazi ?!
Ukungcatshiswa okuqinisekileyo - Ngaba uyanyamezela okanye ulwe?
ezaposwa ngomhla 16.09.2021 17.09.2021
Isini esithandekayo, uthando lokwenyani, nokuba utshatile kwincoko, ngoku ngekhe umangalise nabani na onale nto. Kodwa uthando olunjalo lubuchaphazela njani ubomi bokwenyani?
Ungayeka kanjani ukuthanda kwaye ulibale indoda
ezaposwa ngomhla 15.09.2021 15.09.2021
Ukwahlukana akuyondlwan 'iyanetha, kodwa ke kunzima ngakumbi ukulahla "oyintanda" kunye nentloko. Ukuba uthi, ndimlibele, kodwa zoba ukufana phakathi kwakhe nabahlobo abatsha, mqumbele. Ke awuyilibalanga indoda ...
Amantombazana amaninzi akholelwa ukuba amadoda awathandani kwaphela. Masizame ukujonga ukuthandana kwindawo yokujonga amadoda.
Ungasinikela njani isandla nentliziyo kwintanda yakho?
ezaposwa ngomhla 15.08.2021 15.08.2021
Ukuba ufuna ukwenza isindululo esiqaqambileyo, esingalibalekiyo nesingaqhelekanga, qiniseka ukuba uyalifunda eli nqaku!
Iinyani ezinomdla malunga namadoda
ezaposwa ngomhla 26.07.2021 26.07.2021
Yintoni eqhelekileyo kumadoda? Yeyiphi imikhwa kunye nokuziphatha? Olunye ulwazi luyakumangalisa.
I-Toastmaster yomtshato-unokukhetha njani?
Ziziphi iimpawu omele abe nazo umamkeli womtshato? Ndicinga ntoni? indlela yokukhetha i-toastmaster? Masifumanise!
Ujika njani ngorhatya lothando lube sakusasa ebhedini
Kule mihla, isondo sele sifumaneka phantse njengekofu, kodwa ungayifumana njani. Ungamkholisa njani intombazana? Ukuze ube yinkosana kwihashe elimhlophe, abafuna kuphela "ukuzonwabisa" kodwa kunye nokwakha ubudlelwane.
ezaposwa ngomhla 02.02.2021 02.02.2021
I-Nymphomania yimfuno engagungqiyo kwaye enkulu yesini ebaluleke ngakumbi kunazo zonke ezinye iimfuno. Emadodeni, ukuphazamiseka kuthiwa yi-satiriasis.I-nymphomaniac ngumfazi osoloko enqwenela ukwabelana ngesondo. Ukwabelana ngesondo ngumlutha ongenakukulawula.
Ungabugcina njani ubudlelwane kude
ezaposwa ngomhla 24.09.2019 24.09.2019
Uninzi lucinga ukuba ubudlelwane obukude abunakwenzeka, kodwa kufuneka wenze ntoni xa uthando lwakho luhlala kude kuwe. Ubunzima, kukho abo bahlala kunye, kwaye ubudlelwane bukude omnye komnye ...
Kutheni xa ukwanga kuvala amehlo abo?
Ngokuphindaphindiweyo unokuva umbuzo wokuba kutheni amehlo evaliwe xa uncamisa, okanye kutheni xa bephuza, bayawavala amehlo abo? Umbuzo awukho mtsha, kodwa phantse akunakwenzeka ukuba ufumane impendulo engacacanga kuwo, ewe, kwaye ...
Ukutsalwa entanyeni - inkanuko kwindawo evulekileyo
Kukho iitoni zeesimboli zothando kunye nokwabelana ngesondo kuluntu lwanamhlanje. Umntu unxiba i-pendant eyahlula kubini. Omnye wenza umvambo onegama lomntu omthandayo. Kwaye kukho abo bathi, ngaphandle kokuthandabuza, babeka iHickey ...
French kiss: uyenza njani? Iingcebiso ezisibhozo zobuchule
Ukuba ubuza abantu baseParis: "Njani le French kiss?", Baya kukuphendula bathi: "Kunzima ukuchaza into emanyanisa imiphefumlo yabathandi!" Kwaye kunzima ukuphikisana naloo nto! Ngamagama alula, nto nje ...
Unokufumana njani ukuba indoda inomthandi? Fortune ukuxelela
Ngokwezibalo zehlabathi, elona nani likhulu loqhawulo-mtshato lwenzeka kwiminyaka emi-5 yokuqala yomtshato (malunga neyesithathu). Phakathi kwezizathu zokuba enye yezona "zithandwa" ngalo lonke ixesha kukungathembeki kwelinye lamaqabane ...
Ungayivuyisa njani indoda ngokunzulu kwaye ixesha elide?
Amadoda ahlukile, kwaye wonke umntu uyawathanda amantombazana ahlukeneyo. Nangona kukho into efanayo kwizinto ezikhethwa ngabantu ... Ukuba uqhelanise nazo, uya kufunda indlela yokukholisa indoda. Masingathatheli ingqalelo uthando lobutsha, masiqhubeke ngqo ...
Page 1 Page 2 ... Page 217 Okulandelayo Page